Cultures » အရှေ့နဲ့အနောက် Opposite	12
လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကလေးတွေခမျာ တခါမှ မကြားဖူးတာ ကြားလိုက်ရပြီး မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ အဲဒီထဲကပဲ တစ်ခုကို မကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်နဲ့ ရွေးလိုက်ရတယ်။
လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်လုပ်ပြီး အမျိုးမျိုးဇာချဲ့ခဲ့ကြတာကိုးးးးး ဘာမဟုတ်တာလေးလို့ ထင်ရပေမယ့် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အတွေးအခေါ်မှန်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။
ကျမတို့တတွေ သုံးနေ လွဲနေကြတာတွေ အများကြီးထဲက ပြုပြင်နိုင်တဲ့ အခုလိုအလွဲလေးတွေကို မြင်ဖို့ ပြင်ဖို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ About Ma Ma
မြစပဲရိုး says: After nearly5Years, you have done it my dear Sis.
Who Next ……….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
သော်ရေးးတဲ့ ဝိ လိုပေါ့… အရှေ့ တိုင်းးထဲ ရှိ တာ ချင်းး တူတူ ကျနော်တို့ ဆီ က ပို ဆိုးး သလားးမသိ…
အောင် မိုးသူ says: အချို့ ကလေးတွေဟာ အလိုလိုက်လွန်းရင် အကျင့်ပျက်တတ်ကြတယ်။
kai says: ဂရင်းကဒ်ဆိုတော့.. အမေရိကန်မှာ..ဆက်တိုက် ၅နှစ်နေရင် အမေရိကားဖြစ်မှာပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးပြောပြောနေတာကို သတိမထားမိဘူးဖြစ်သွားတယ်။
ခုတော့ သဂျီးကို လုပ်ကြံချင်စိတ်များပြီး သူများမကောင်းကြံ ကိုယ်သာအရင်ထိ ဆိုတဲ့ စကားပုံလို ဖြစ်သွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သိနေတယ်လေ…မမ တစ်ယောက် သဂျီးအပြောခံရတော့မယ်ဆိုတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့လေ။
မြစပဲရိုး says: ဟင်း ဟင်း
သို့ပေမဲ့ ကိုယ်လည်း တစ်ခါ က သူတို့ လို ဆိုတာလေး သထိရစေဖို့ သမိုင်းလေး ကို တူးပေးလိုက်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: စစ်ကူပေးလို့ စိမ်းလိုက်ပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1870
nature says: တစ်သိန်းပြည့်သွားပြီလားး။ အဟီးးးးးးး
kai says: အဲဒီပိုက်ပိုက်.. ရွာကိုပြန်လှူလိုက်ပြီ… အဟား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ်… သူများအောက်မကျအောင်.. သူများနဲ့တန်းတူ… သူများထက်သာအောင်.. အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့ ကလေးတွေကို ဖျက်စီးနေတာ မိဘတွေပဲ.. ကလေးရဲ့ အပြိုင်အဆိုင်စိတ်တွေ.. မလိုအပ်တဲ့အပေါ် အလေးထားနေတာတွေကို ကိုယ်ကတောင် ပြုပြင်ပေးရမှာ..အခုက မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ကျောင်းသွားကြိုတာကအစ..အပြိုင်အဆိုင်ဝတ် ဆိုတော့ ပိုဆိုးရော..
အခုလိုပြောလိုက်တဲ့ အန်တီကို Bravo ပါလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.